Celebrity – Mega Quiz
အဖေဖြစ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲ Photoshop နဲ့ထည့်သွင်းပြီး စနောက်ခဲ့သူ – (၂၅)ပုံ
Celebrity, Funny / By Wilson
Photoshop ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ကြသူများဟာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို အလှဆုံးဖြစ်အောင် ကောင်းကောင်းပြုပြင်နိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ မူရင်းရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာ မလှမပဖြစ်နေရင်တောင်မှ မိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေကို လှပအောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်သလို အပြင်လောကမှာ တကယ်မရှိတဲ့ စိတ်ကူးရင်ဆန်ဆန် ဓာတ်ပုံများကိုပါ ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်ကြပါတယ်။ ထို့အတူ Photoshop ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Matt Bonito ဆိုသူဟာ သူ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို သူတတ်ကျွမ်းတဲ့ Photoshop ပညာနဲ့ နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေထဲမှာ ဟာသဆန်ဆန်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ဖန်းတီးခဲ့ပါတယ်။ အောက်ဘက်မှာတော့ Matt Bonito ပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့ သူ့ဖခင်ရဲ့ဓာတ်ပုံများကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. Titanic 2. Avengers 3. The Dark Knight 4. Thor 5. Forrest Gump 6. Avengers 7. Titanic 8. …
အဖေဖြစ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲ Photoshop နဲ့ထည့်သွင်းပြီး စနောက်ခဲ့သူ – (၂၅)ပုံ Read More »
ဆယ်လီ‌တွေရဲ့ဓာတ်ပုံထဲ မိမိကိုယ်ကိုထည့်သွင်းကာ ရယ်စရာကောင်းအောင် ပြုပြင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား – (၂၅)ပုံ
ယခုလိုဓာတ်ပုံတွေကို ရယ်စရာကောင်းအောင် ပြုပြင်ထားသူကတော့ အသက်(၂၉)နှစ်အရွယ် Average Rob ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Belgium နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Photoshop ပညာမှာ အထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း အိုဘားမား၊ လေဒီဂါဂါ၊ ဂျက်စ်တင်ဘီဘာ၊ စပိုက်ဒါမင်း အစရှိတဲ့ နာမည်ကြီးဆယ်လီများရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ မိမိကိုယ်ကိုထည့်သွင်းပြီး ရယ်စရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရင်း Instagram မှာ နာမည်ကြီးလာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Instagram မှာ Follower ပေါင်း ၃ သိန်းကျော် ရရှိထားပါတယ်။ ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ Average Rob ပြုပြင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေထဲက ရယ်စရာကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံများကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ …
ဆယ်လီ‌တွေရဲ့ဓာတ်ပုံထဲ မိမိကိုယ်ကိုထည့်သွင်းကာ ရယ်စရာကောင်းအောင် ပြုပြင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား – (၂၅)ပုံ Read More »
နာမည်ကြီးဆယ်လီတွေရဲ့ဓာတ်ပုံထဲကအတိုင်း Cosplay ပြုလုပ်ပြီး နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ကောင်မလေး – (၂၅)ပုံ
နာမည်ကြီးဆယ်လီတွေရဲ့ဓာတ်ပုံထဲကအတိုင်း Cosplay ပြုလုပ်ပြီး နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ကောင်မလေး – (၂၅)ပုံ Read More »
နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတွေထဲမှ ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးများရဲ့ လူစားထိုးစတန့်သမားများ – (၂၅)ပုံ
နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတွေထဲမှ ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးများရဲ့ လူစားထိုးစတန့်သမားများ – (၂၅)ပုံ Read More »
ကာတွန်းကားကြိုက်နှစ်သက်သူတိုင်းဟာ Disney က ဖန်တီးထားတဲ့ Aladdin, Mulan, Frozen အစရှိတဲ့ နာမည်ကြီးကာတွန်းကားတွေကို သိကြမှာပါ။ ထိုနာမည်ကြီးကာတွန်းကားတွေကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Disney က Animator ပညာရှင်များဟာ သူတို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့အသွင်အပြင်များကြောင့် ကြည့်မိသူတိုင်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် အမှတ်ရစေခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ အမှတ်ရစေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်ရဲ့ သေးငယ်တဲ့ခါး၊ ကြီးမားတဲ့ခေါင်း၊ မျက်လုံး၊ ဆံပင် အစရှိတာတွေလည်း အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအတွက်ကြောင့် အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Toyboyfan ဆိုသူဟာ ထိုကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေသာ လူတွေဖြစ်နေခဲ့လျှင် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ရုပ်ပုံစံအနေထားကို AI နည်းပညာနဲ့ ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အောက်ဘက်မှာတော့ Toyboyfan ဖန်တီးထားတဲ့ ရုပ်ပုံအချို့ကို မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ Elsa ၂။ Kristoff Bjorgman ၃။ Moana ၄။ …